सिरियामा भीषण बमबारी भइरहेको छ तर हामीहरु ँसिरिया तथा सिरियाका बालबालिका बचाउ भनेर फेसबुके भित्तो रङ्ग्याउन मै ब्यस्त भएका छौं । के रसियाले हामीले गोहीको आँसु चुहाएको फेसबुक हेर्‍या होला त ?
आतंककारीको अड्डा ध्वस्त पार्न र आतंककारी सफाया गर्न भनेर बिद्रोहीको सेनामाथि सिरियाको सत्ता र उसले मागेको सहयोग दिदै रुसले सिरियामाथि यति भयानक बमबर्षा गर्‍यो कि मानवता ठहरै मर्‍यो । जो मानवताप्रति संवेदनशील छन्, तिनीहरुले त आफै मरेको अनुभूति समेत गरे । तर नेपाल सरकारले चुँसम्म बोलेन । राष्ट्रसंघ युद्ध विराम युद्धविराम भनिरहदा नेपालले त्यही भाषासमेत बोल्ने आँट गरेन । हाम्रो परराष्ट्रनीति कतिसम्म संवेदनहीन भइसकेछ ?
बम वर्षाको आगोमा जलिरहेको छ, डढिरहेको छ सिरियो । सिरियामा जतिसुकै शान्तिको कुरा गरे पनि गृहयुद्धले तहसनहस भइरहेको छ । सिरियामा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सत्ताको दमनचक्र चलाएका कारण राष्ट्रपति बसर अल असद असफल भए र सत्ता टिकाउन उनले शक्तिको प्रयोग गरे । जसका कारण गृहयुद्धले डढेलो सल्केको छ सिरियामा । राष्ट्रपतिले विदेशी समर्थित आतंकवाद सह्य नहुने भनेर चालेको कदमले सिरियामा मर्नेमार्ने अर्को आतंक चलिरहेछ ।
सिरिया यतिबेला युद्धको मैदान बनेको छ र विदेशी ताकतहरु पसिसकेका छन् । सिया सुन्नीका नाममा जातीय दङ्गा झन चर्केको छ । राष्ट्रपति सिया हुन् भने उनले सुन्नीको नामो निसान मेटाइदिन युद्धलाई चर्काइरहेका छन् । स्लामिक स्टेटका कुरा पनि उठेका छन् । इरान, लेवनान, इराक, अफगानिस्तान, यमनसमेत सियासमर्थित सिरिया सेनाका साथमा लड्न पुगेका छन् । भन्नलाई आतंकवादीलाई निसाना बनाएको भनिए पनि अधिकांश बालबालिका मारिदैछन् ।
नेपालले मानवीय र राष्ट्रसंघको आवाजसमेत बोल्न सकेको सुनिएन ।